Armani runako runozivisa runako rutsva kumeso | Nhau dzeWaya
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Runako rweArmani runozivisa Huso hutsva hwekunaka
Runako rweArmani rwakazivisa mutambi weAmerica Tessa Thompson sechiso chitsva. Thompson acharatidza mune ese ari maviri macampaign eiyo iconic Luminous Silk Foundation uye itsva Lip Power, yakapfurwa nemutorwa wemifananidzo weSweden Mikael Jansson.
Luminous Silk Foundation inozivikanwa kuve yekutanga kuratidzwa kwehuzivi hwaArmani hwekunatsa kupenya nekubata kwakapfava, uye inouya nerenji inotenderera makumi mana emavara, kuti ienderane neganda rega rega. LIP POWER irefu refu satin lipstick yakagadzirwa neinodzivirira, yakagadzika oiri uye yakakwirira-yakasimba pigment kuendesa yakajeka ruvara nekupfeka kwezuva rose, kunyaradza uye kunzwa kwakareruka. Yaro yekuvandudza-yakaita kudonha-yakaita bara inobvumira kureruka kwekushandisa uye chaiyo, yakatsanangurwa mitsara.
“Pfungwa yangu yerunako inoshanda kumukadzi wese nekuti inosimudzira hunhu hwake nekusiyana. Tessa Thompson akandirova nesimba rinopenya raanoburitsa, kudzikama kwakasimba kwemaitiro ake. Ndinofara kukwanisa kushanda naye uye kuratidza chimiro chitsva chekareidoscope yechikadzi yeArmani runako”, akadaro Giorgio Armani.
Tessa Thompson akawedzera kuti: "Mazano edu pamusoro pezvakanaka, tsika, kuchinja, uye kuwedzera kubatanidzwa. Chandinoda nezveArmani inzira yainopa chero rudzi rwemukadzi kuti anzwe zviri nani. "
Thompson, akaberekerwa muLos Angeles, akatanga mutheater ndokuzoita zvidiki muterevhizheni asati atanga zita rake mufirimu. Basa rake rekutanga rine mukurumbira, rekutamba firimu raive "Vanodiwa Vachena Vanhu" muna 2014, ndokuzoteverwa neAva DuVernay's 2014 firimu "Selma". Thompson anozivikanwa zvakare nebasa rake mumutambo weEmmy-akasarudzwa "Westworld". Muna 2015, Thompson akaita nyeredzi mu "Creed" uye akadzorerazve basa rake mu "Creed II" munaNovember 2018. Thompson parizvino ari mukugadzirwa kweCreed III. Thompson akaridza Valkyrie muMarvel firimu "Thor: Ragnarok" muna 2017, achiteverwa ne "Avengers: Endgame" muna 2019, uye achaita zvakare basa mune iri kuuya "Thor: Rudo uye Kutinhira", yakagadzirirwa kusunungurwa muna 2022. Muna 2019, Thompson akaonekwa pabutiro remagazini yeTIME seMutungamiriri weChizvarwa Chinotevera. Muna 2020, Thompson akabatanidza nyeredzi mu "Rudo rwaSylvie", iyo yaakagadzira zvakare. Thompson achangobva kuhwina rumbidzo yebasa rake saIrene Redfield muRebecca Hall's 1920s-set firimu "Passing," rakaburitswa munaNovember 2021 paNetflix. Iyi firimu igadziriso yebhuku raNella Larsen's 1920s Harlem Renaissance inoongorora tsika yekupfuura kwemarudzi. Padivi pebasa rake rekuita, muna 2021, Thompson akatanga kambani yake yekugadzira, Viva Maude, yaakasaina chibvumirano chekutanga neHBO/HBO Max, achitanga nebhuku kuratidza kuchinjirwa kwe "Chakavanzika Hupenyu hweMadzimai eChechi" uye " Anotya Rufu.” Uye zvakare, Thompson akagadzira uye achaita kuburitsa iyo docu-yakatevedzana yeHulu ine musoro wekuti "Puzzle Talk," iyo iri kusimudzira parizvino.
Tessa Thompson anobatana neArmani runako padivi pevatambi vemitambo Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani, naGreta Ferro; vatambi: Ryan Reynolds, Jackson Yee, naNicholas Hoult; uye mienzaniso Barbara Palvin, Madisin Rian naValentina Sampaio. Imwe neimwe yeArmani runako chiso, nenzira yavo yakasarudzika, inobata chiono cherunako chaGiorgio Armani.
Muedzo Mutsva Wekiriniki Inoongorora Huropi Yakadzama Kukurudzira Kurapa Alzheimer's